တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားအုန်း၊ ကောင်းတဲ့ကံတွေက အခွင့်သာလို့ ခွေးကလေး လှလှလေးဆိုရင်
ကျွေးမယ့်သူနဲ့ မွေးမယ့်သူနဲ့၊ သူ့ကို တကတည်း မွေးချင်တဲ့သူတွေနဲ့၊ ခွေးကလေးက လှတာကိုး။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:02 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:00 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 7:55 PM No comments:
တစ်နေ့မှာ ဆွမ်းခံအပြန် ရဟန်းတွေက ဘုရားရှင်ကို လျှောက်တယ်။ "အရှင်ဘုရား၊ ဆွမ်းခံလမ်းမှာ အခြားဘာသာရေးဂိုဏ်များမှ အယူအဆကွဲပြားပြီး သူတို့အမြင်တွေကို လှည့်လည်ဖြန့်နေတဲ့သူတွေဟာ အပြန်အလှန် ရန်လိုမုန်းထားပြီး "သူ့တရားက မှန်တယ်၊ ငါ့တရားကမှန်တယ်" ဆိုပြီး ငြင်းခုံရန်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ခဲ့တယ်ဘုရား"
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူပြီး၍ ရက်ပိုင်းအတွင်း၌ ပင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် ဆိုရပေမည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရှင်၏ ပံ့သကူဒုကုဋ် သင်္ကန်းကို ခံယူရရှိသော ဓုတင် ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ရ “အရှင်မဟာကဿပ မထေရ်မြတ်” သည်နောက်ပါရဟန်း (၅၀၀)ဖြင့် “ပါဝါပြည်” မှ “ကုသိနာရုံ”သို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအားဖူးမြော် ရန်ကြွတော်မူလာစဉ် လမ်းခရီးအလယ်၌ တက္ကတွန်းတစ်ဦးထံ မှ... “ကုသိနာရုံ၊မလ္လာမင်း အင်ကြင်း ဥယျာဉ်ဝယ် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်တော်မူသည်မှာ(၇)ရက်ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း”သတင်း စကားကြား သိရ၍ ရဟန်းတစ်ချို့ယူကြုံးမရ ငိုကြွေးကြရာ၊တောထွက်ရဟန်းကြီး
ငရဲကျကြောင်းတရား ( ၁၀ )ပါး။
ကာမဖြင့် မှားယွင်းစွာ ကျင့်လေ့ရှိခြင်း။
တရားမှတ်ဆဲယောဂီမှာ ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်မှန်ပါသလား? ဝေဒနာ ခွါနည်းနဲ့ ဝေဒနာချုပ်အောင် လုပ်နည်း?
ဒကာ။ ။ ခုကာလ ၀ိပဿနာတရား ပွားများရှုမှတ်နေတဲ့ ယောဂီတွေက ဝေဒနာချုပ်အောင်လိုက်တယ်၊ ကျွတ်အောင်လိုက်တယ်၊ ဝေဒနာချုပ်မှ တရားအမှတ်ဖြုတ်တယ်တဲ့၊ သူတို့ရဲ့ ၀ိပဿနာ ဓမ္မဆရာများကလည်း ဝေဒနာချုပ်အောင် လိုက်ရမယ်လို့ စေခိုင်းတတ်ကြပါတယ်တဲ့၊ အဲဒါတွေဟာ မှန်ပါရဲ့လား ဆရာတော်၊ စိတ်ရှိသူမှာ ဝေဒနာချုပ်နိုင်ပါသလား။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 10:59 AM No comments:
၂။ ဗုဒ္ဓသည်တ၀မ်းကွဲနှမတော်စပ်သူ ယသော်ဓရာနှင့် လက်ဆက်ပြိး သားတယောက်ရသောအခါ အသက်(၂၉) တွင် တောထွက်သည်။
အများကြီးပြုလို့ ကောင်းကံတွေက လွှမ်းနေပြီဆိုမှဖြင့် မကောင်းကံတွေက အကျိုးပေးမယ်လို့
၂။ သံဃာတော်များ၏ ချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုး။
လင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ သူက အမျိုးဇာတ်ကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ မာန်မာနတွေ တက်ခဲ့တယ်။
၃၉။ ရှေ့ကစူးစူး၊ ဒူးလက်ကိုထောင်၊
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီဘက် မိန်းမများ တက်ကောင်းသလော၊ ကျိုက္ခမီဘုရားတန်ဆောင်းပေါ် မိန်းမများ တက်ကောင်းသလော
ဘုရားကျောင်းတော် စေတီပေါ်သို့ မိန်းမများ မ၀င်ကောင်း မထိကောင်း ရှိမခိုးကောင်းဘူးလား
ဒကာ။ ။ ခုခေတ်ကာလ အချို့သော ဘုရားလူကြီးတွေက ဤစေတီတော်က တန်ခိုးကြီးသည် နတ်ကြီးသည် ဒါကြောင့် ဤစေတီအနီးသို့ မိန်းမများ ချဉ်းကပ်ထိကိုင်လျက် ရှိခိုးဦးတိုက်ခြင်းမပြုရ၊ ပြုလုပ်လျှင် လေကြီးမိုးကြီးကျလိမ့်မည်၊ ကျားတို့ ဆင်တို့ ထလိမ့်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်တားမြစ်ကြပါသည်၊ ပုံပမာ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတို့လို ဟာမျိုး။
ဒကာ။ ။ သောတာပတ္တိမဂ်က ဒိဋ္ဌိနဲ့ ၀ိစိကိစ္ဆာကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်ဒိဋ္ဌိကို ပယ်တာလဲ ဆရာတော်။
သောတာပန်တွေဟာ လင်ယူ သားမွေး ရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စတွေ လုပ်နေသေးတယ်၊ သား မြေး လင် သေတော့လည်း ငိုကြွေးသေးတယ် ဆိုတော့ကာ ဒိဋ္ဌိစွဲ မကုန်သေးလို့သာ ဖြစ်ရမှာပေါ့၊ ရှင်းပြပါဦးဆရာတော်၊ လွယ်လွယ်နဲ့ သိနိုင်အောင်ပေါ့ ဘုရား။
တာဝန် ဝတ္တရားသာလျှင် အဓိက
ကြုံခဲတဲ့ သာသနာ ရခဲတဲ့ ဘဝမှာ
သာသနာ့ ဘောင်ဝင် ရဟန်းဝတ်
ငတ်အောင် နှိပ်စက်နိုင်တဲ့ ကံပါပေမယ့် အို .. လူ့ဘဝဆိုတာ နောက်ဆုံး တောင်းစားရင် ရသေး
၅။ ဇရာမီး = အိုမင်းရသဖြင့် ပူလောင်ခြင်း။
သုခဝေဒနာဆိုတာ သမ္မုတိသစ္စာနယ်ထဲက စကားပါ။ ပရမတ္တသစ္စာက “သဗ္ဗေသင်္ခါရာ
ဒုက္ခာ” တဲ့။ သုခဝေဒနာကို သိမှတ်နေတဲ့ ယောဂီရဲ့ အသိဉာဏ်မှာ အဲဒီ ပေါ်လာတဲ့ သုခ ခံစား
ချက်ကလေးတွေဟာ မှတ်တိုင်း ရှုတိုင်း ပျက် ပျက်သွားတာ တွေ့ရခြင်းကြောင့် ဒုက္ခသစ္စာတွေ
ပေါ် ပေါ်လာတာပါပဲ။ သုခရယ်လို့ မမှတ်ထင်တော့ဘူး။ “ မြဲမှ မမြဲတဲ့တရားဟာ အနိစ္စပပပဲ ”။
လောကဓံတရား (၈) ပါး
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 3:39 PM No comments:
ငရဲဆိုသည်မှာ.... နှင့် ငရဲ၏ ဒုက္ခဆင်းရဲများဟူသည်...
အပါယ်ဟူသည် ပါဠိလို အပါယ (ချမ်းသာမှု အပေါင်းမှ ကင်းဆိတ်ခြင်း) မှ ဆင်းသက်လာသည်။ အပါယ် လေးဘုံဆိုသည့် ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ် ဟူ၍ရှိလေသည်။
ငရဲ အမျိုးအစား (၈) မျိုး ရှိလေသည်။
၁) သိဉ္စိုး ငရဲ၊
၂) ကာဠသုတ် ငရဲ၊
၃) သံဃာတာ ငရဲ၊
၄) ရောရုဝ ငရဲ၊
၅) မဟာရောရုဝ ငရဲ၊
၆) တာပန ငရဲ၊
၇) မဟာ တာပန ငရဲ၊
၈) အဝီစိ ငရဲ စသည်ဖြင့် ငရဲကြီး ရှစ်ထပ် ရှိသည်၊
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 3:38 PM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုသည် ကောင်းကင်မှ ပျံလာသော ရဟန်းတော်တိုင်းကို 'ရဟန္တာ'ချည်းထင်တတ်၏။
အကျဉ်းချုပ် မှတ်သားရမည်မှာ 'ကောင်းကင်မှာပျံနိုင်တိုင်း ရဟန္တာမဟုတ်၊
ရဟန္တာတိုင်းလည်းကောင်းကင်မှာမပျံနိုင်' ဟူသော အချက်ပင်ဖြစ်၏။
ကောင်းကင်တွင် ပျံနိုင်သောသူသည် သုံဦးရှိ၏ ။ ဆေး၊ အင်း၊ ဓာတ် စသည် အောင်မြင်သဖြင့် ၀ိဇ္ဇာဇော်ဂျီ၊
တပသီအချို့ ကောင်းကင်တွင် ပျံနိုင်၏။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 3:32 PM No comments:
မုသာဝါဒကံရဲ့ မကောင်းကျိုး ၁၆-ပါး။ (မွေးနေ့ ဓမ္မဒါန)
ရှင်ရာဟုလာ၏ စိတ်နေသဘောထား။ (မွေးနေ့ ဓမ္မဒါန)
ရှင်ရာဟုလာသည် အမျိုးအားဖြင့် မင်းမျိုးအစစ်မှာ ဖွားမြင်ခဲ့၏။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း
စကြာမင်းဖြစ်လောက်သော ဘုန်းကံပါရှိ၍ ရုပ်အဆင်းအားဖြင့် ကြော့ရှင်းခန့်ညား အများ ကြည်
နူးလောက်အောင် ကျက်သရေကိုဆောင်၏။ ရှင်သာမဏေဘ၀သို့ ရောက်လာသောအခါ ဗုဒ္ဓမြတ်
စွာ၏ ရင်သွေးတော်ရတနာဖြစ်သောကြောင့်လည်း ရဟန်းတော်များပင် လေးစားမြတ်နိုးကြရုံမက
ကောသလမင်း, အနာထပိဏ်, ၀ိသာခါစသော မင်းပိုင်း သူဌေးသူကြွယ်ပိုင်းကလည်း ကိုင်းရှိုင်း
ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ပြီးနောက် ၇ ရက်အကြာ။ (မွေးနေ့ ဓမ္မဒါန)
မြတ်စွာဘုရားဟာ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၄၈) ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့မှာ မလ္လာတိုင်း
ကုဿိန္နာရုံမှာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော် မူပါတယ်။
ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူပြီး ရှင်မဟာကဿပမထေရ်ကြီးဟာ နောက်ပါရဟန်း(၅၀၀)
နှင့်အတူ ပါဝါပြည်မှ ကုဿိန္နာရုံသို့ မြတ်စွာဘုရားအား ဖူးမျှော်ရန် ကြွရောက်လာစဉ် လမ်းခရီး
မှာ တက္ကတွန်းတစ်ယောက်က မြတ်စွာဘုရားဟာ ကုဿိန္နာရုံ မလ္လာမင်းတို့ရဲ့ အင်ကြင်းဥယျာဉ်
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏လက်ထက်တော်တွင် အသက်ရာကျော်ရှည်ကြသူများ။(မွေးနေ့ ဓမ္မဒါန)
ကိုယ့်သန္တာန်မှာ တရားရှိ မရှိ၊ သိချင်လျှင်။ (မွေးနေ့ ဓမ္မဒါန)
မာနတွေ ဣဿာမစ္ဆရိယတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ဒီသဘာဝတရားတွေ ရှိနေသေး
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:58 PM No comments:
၀ိနည်းပါဠိတော်အရ ညွှန်ပြအပ်သော သီလသိက္ခာသည် သာသနာတော်၏ အရင်းအမြစ်
အကျဆုံးဖြစ်၍ သာသနာတော်၏ အသက်ဖြစ်သည်။ ရဟန်းတော်များသည် ထို ၂၂၇ သွယ်သော
၀ိနည်းတော်အတိုင်း သီလသိက္ခာကို မထိန်းသိမ်း မစောင့်စည်းတော့ဘဲ ဆယ်ပါးသီလမျှကိုသာ
စောင့်စည်းနေထိုင်ခဲ့သော် သာသနာပ ရသေ့ပုရိဗိုဇ် အနေမျှသာ ဖြစ်ကြတော့၏။ သာသနာတော်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:52 PM No comments:
သော စာလုံးသည် စီးပွားရေးပင်စည်ကြီးအပေါ် အမှီပြုလျက် ရှိပါ၏။ စီးပွားရေးပင်စည်ကြီး
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:45 PM No comments:
“သင်္ကန္တ” ဆိုတာ “ကူးပြောင်းခြင်း”တဲ့။အဲဒီကနေ အခုတော့ “သင်္ကြန်”တဲ့လေ။
ဒါလည်းပဲ ပြောင်းလဲခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ဝေါဟာရပြောင်းလဲခြင်းပေါ့။
သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာကလည်း “ပညတ်သဘော”ဆိုတော့ တသမှတ်တည်း ဘယ်ရှိမလဲလေ။
ပြောင်းနေမှာပါပဲ။ မပြောင်းလဲတော့တဲ့ အမှန်သစ္စာကို ရရှိမှပဲ ပြောင်းလဲခြင်းတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားကြမှာပါ။
နှစ်သစ်အခါသမယမှာ ပိုပြီးကောင်းလာစေချင်လို့ရှိရင်ပိုပြီး သဒ္ဓါတရားတွေ ကောင်းလာအောင်၊
ပိုပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ လုံခြုံလာအောင်၊ပိုပြီး စွန့်လွှတ်မှုတွေ ခိုင်မာလာအောင်၊
ပိုပြီး အသိဉာဏ်တွေ ကြွယ်ဝလာအောင် လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းတရားတွေ ပြည့်စုံမှသာလျှင် မိမိတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချကဖနဲ့ ချမ်းသာသုခတွေ၊မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေဆိုတဲ့ ဆုတောင်းတွေ ၊
တောင်းဆိုမှုတွေဟာ တစ်လုံးတစ်ဝကြီး ဖြစ်လာမှာပါ။
ထိုင်ဝမ်မှာ သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ ရှင်းရင်ဘုန်းတော်ကြီး ဟောတဲ့တရားထဲကပါ။ နှစ်သက်လို့ ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။
အထက်တန်းလွှာမှာ အရည်အချင်းရှိတယ်။ မာနမရှိပါ။
အလယ်တန်းလွှာမှာ အရည်အချင်းရှိတယ်။ မာနကြီးတယ်။
အောက်တန်းလွှာမှာ အရည်အချင်းမရှိပါ။ မာနကျတော့ လုံးဝမလျှော့ပါ။
-【တိပိဋကဓရ ယောဆရာတော်】ဘဝဆိုတာ ကောင်းကင်က တိမ်တိုက်ကလေးတွေလိုပါပဲ။
လူ့ဘဝသက်တမ်းကို ယေဘုယျပြောရရင် (၇၅)နှစ်ပါပဲ။(၇၅)နှစ်အတွင်းမှာပဲ
စေတနာကို ကံလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ပါလျက်၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအားထုတ်ပါလျက်၊ ၀ိပဿနာတရား ပွားများအားထုတ်ပါလျက်
အသံကောင်းတာနဲ့နာမည်ကြီးတာကို ကြည်ညိုကြပါတယ်။ ။
၂၇။ ကွမ်း ဆေး မီးလျှင်၊ ဧည့်သည်မြင်သော်
တရားစစ် တရားမှန်၏ အင်္ဂါလက္ခဏာများ။
ကပ်ငြိမှု ရာဂကင်းဖို့သာ ဖြစ်စေ၏။
ကပ်ငြိမှု ရာဂနှင့် ယှဉ်တွဲဖို့ မဖြစ်စေခြင်း။
သံယောဇဉ် ကင်းဖို့သာ ဖြစ်စေ၏။
သံယောဇဉ် တိုးပွားဖို့ မဖြစ်စေ။
ဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ဖို့သာ ဖြစ်စေ၏။
ထောင်၊ တစ်သိန်းမက ဘုရားတစ်ဆူနှင့်တစ်ဆူ ကြားကာလပါတ်လုံး ထမင်းတစ်လုပ်မှ မစားရ၊
၁။ တကွမ်းစားအိုးမှ ဘယ်အခါမျှ ထမင်းမလျော့သောအိုးကို ရရှိခြင်း။
၂။ အနာနှိပ်စက်သူအား ကိုင်တွယ်လျှင် အနာပျောက်ကင်းခြင်း။
၃။ အလိုရှိမှု ကိုင်တွယ်သော ၀တ္ထုမှန်သမျှ ရွှေဖြစ်ခြင်း။
၄။ မျိုးစေ့ သစ်စေ့ကို စိုက်လျှင် ချက်ချင်း သီးပွင့်ခြင်း။
၅။ ရေ အလိုရှိက တောင်ထိပ်က ရေထွက်ခြင်း။
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီဘက် မိန်းမများ တက်ကောင်းသလော၊ ကျိ...
ကိုယ့်သန္တာန်မှာ တရားရှိ မရှိ၊ သိချင်လျှင်။ (မွေးနေ...